IBack of the Moon, ingqayi evusa indulo lime ngezinyawo – Bayede News
Ingqayi engempilo yaseSophiatown eqondiswe ngu-Angus Gibson
Ingqayi engempilo yaseSophiatown eqondiswe ngu-Angus Gibson iqalile ukukhonjiswa emabhayisikobho akuleli ziyisi-6 kuMandulo. Emasontweni amabili edlule yayethulwa ngokusemthethweni eSuncoast Casino eThekwini emva kokuba le ngqayi idle umhlanganiso ku40th Durban International Film Festival ngoNtulikazi walo nyaka. Kwakungumcimbi owawuhanjelwe yizikhulu ezifana no-Anant Singh ohamba phambili kuleli kwezamafilimu noNks uBarbara Hogan oyinkosikazi yomholi kaKhongolose ongasekho u-Ahmed Kathrada.
ULukanku odlala indawo ephambili ephawula ngempumelelo yabo uthe, “Ngangingacabangi nakancane ukuthi singaphuma phambili ngenxa yokuthi yayiminingi imingenelo yengqayi engangiyibona izosidlisela ogageni. Ngesikhathi sibizwa kuthiwa sishaye wonke umuntu kwaba wumzuzu obaluleke kakhulu kithi sonke.”
Umongo wendaba yintokazi engumzwilili waseSophiatown u-Eve olingiswa nguMoneoa Moshesh ozithola engena othandweni olugqamuka amalangabi nomholi weqembu lezigelekeqe zaseSophiatown uBadman yena olingiswa nguRichard Lukunku. U-Eve ngendlela amuhle nacula kahle ngawo ubangwa ngabaholi bamaqembu ezigelekeqe.
Inhliziyo yakhe iyathatheka wuBadman okucaca ekugcineni ukuthi impilo yakhe izimelele emangeni nasemlandweni wokuba yisiboshwa. Okuphakamisa amaphaphu endabeni wukuthi konke okwenzekayo kwenzeka ngosuku olwandulela ukuthi u-Eve awelele phesheya kwezilwandle nomdlalo weshashalazi. Lolo futhi wusuku lokududulwa kwaboHlanga wuHulumeni wobandlululo besuswa eSophiatown.
Ngokuka-Angus Gibson, ebhala iBack of the Moon inhloso yakhe kwakuwukuveza impilo yaseSophiatown njengoba yayinjalo ngowe-1958. “Ngangifisa ukuveza amaqiniso, usikompilo nempilo yabantu ngaphandle kokugxila kakhulu ebudlelwaneni bezinhlanga ezazakhele leya ndawo,” kubeka uGibson.
ULukunku uthi yilokhu okwamenza angananazi ukuzihlanganisa nokwakhiwa kwale ngqayi.
“Kwathi uma nginikezwa iscript ngazitshela ukuthi ngizokhipha lonke ikhono enginalo. Lokhu ngakwenza ngokuthi ngithathe uGhost olingiswa nguLemogang Tsipa sayozikhumbuza ukuthi kambe yayibukeka kanjani iSophiatown. Sasiyonxenxa nabangasekho abafela laphayana ukuthi basihole sikhulume okuyikho ngendawo yabo yomlando.”
U-Eve noBadman baqhamuka emhlabeni engefani ngokwendawo abayidlala kule ngqayi. U-Eve amehlo akhe asezinkanyezini, ubuka impilo njengento ehlale iwubukhazikhazi obuvuna yena. Ungumculi ovelele, muhle, uzozungeza amazwe kanti ekugcineni usethole indoda emnika konke abazovakashela nayo amazwe. Ungowokuzalwa eSophiatown kodwa akaziboni ephelela khona.
Ngakolunye uhlangothi umhlaba kaBadman uzimelele kulokhu iSophiatown eyaziwa kakhulu ngakho. Uyisigebengu esesatshwayo njengoba kwakunjalo eSophiatown idume ngezigelekeqe ezazesatshwa. Kodwa uma umbukela eduze uyambona ukuthi unengxenye enobuntu.
Lokhu ukutshengisa lapho esinye isigelekeqe sigwaza sibulala isakhamuzi esethenjiwe endaweni. Umuzwa wakhe wobulungiswa umthuma ukuthi isigelekeqe asijezise ngokushesha ngokuthi asendisele koyisemkhulu.
“Endabeni angisona isigelekeqe esijwayelekile. Kwakufanele ngibe wumholi womphakathi kodwa ngenxa yokwehluleka kwezinhlaka okumele engabe zisebenzela umphakathi ngaphelelwa wumdlandla wokuya emihlanganweni. Ukwehluleka kwalabo okufanele basize umphakathi kubonakala ngokususwa kwabantu baseSophiatown ngokungentando yabo” kuphawula uLukunku.
Lesi sigcawu sengqayi esikhuluma ngokuhluleka kwamakhansela ukusebenzela nokuvikela umphakathi kwenza iBack of the Moon ibe ngeyesikhathi samanje lapho sibona abaholi ezingeni lohulumeni bendawo behluleka ukuvikela nokuletha izidingo emiphakathini abayiholayo. Lokhu kunomphumela wokuthi umphakathi uzithathele umthetho ezandleni zawo. Lokhu kwenzeka ngokuthi uBadman afunge ukuthi uzobabulala abazoza ukuzodla indawo yakubo ngokuthi bamgudluze eSophiatown.
“Ngethemba ukuthi ingqayi abantu bazoyijabulela ngoba inokuningi okuhambisana nokwenzeka ezimpilweni zabo ezinsukwini esiphila kuzo eSouth Africa. Ngiyibona le ngqayi izokhuthaza ababhali abasafufusa kulo mkhakha wezamafilimu. Ziningi izindaba zomlando ezingaphendulwa ingqayi ukuze kulondolozwe ifagugu lezizukulwane ezizayo,” kuphetha uLukunku.
Ingqayi ibophele izihlabani zengqayi kuleli lizwe ezifana noSdumo Mtshali, uThomas Gumede, uLemogang Tsipa, uSiyabonga Thwala nabanye.
Mhlawumbe ngomuso kuyodingeka ababhali bacwaninge bajule ngeSophiatown ukuze kungaboniswa uhlangothi olulodwa lobugebengu nomculo kuphela ngeSophiatown. Kunenkolelo yokuthi impilo yaseSophiatown yayijule ngaphezulu kakhulu kwalokhu esivame ukukuboniswa nokuxoxelwa ngakho.
Umqondisi weBack of the Moon u-Angus Gibson nokho wenze umsebenzi omkhulu wocwaningo ukuze ingqayi iveze isithombe esiyiso ngendawo ephatheka endabeni.
Kusukela endleleni yokugqoka, izimoto okuhanjwa ngazo nenhlalo yaseSophiatown umbhali ukwazile ukwakha isithombe esiyiso.